QM Oo Soo Dhaweysay Baarlamaanka Cucub Ee Soomaaliya | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Tuesday, August 21st, 2012 at 10:19 am QM Oo Soo Dhaweysay Baarlamaanka Cucub Ee Soomaaliya
New York (RBC) Xoghayaha guud ee QM Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyay dhaarinta la dhaariyay xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, oo shaley ka dhacday Muqdisho. Waxa uu sheegay in ay tahay tallaabo wanaagsan oo dhabaha u xaareeysa siddii Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi lahayd iyo taarikh cusub.
“Dadka Soomaalida waxa muddo 20-sano ay sugayeen nabad ka dhalata dalkooda, waa waqtigii ay u bilaaban lahayn Soomaaliya taarikh cusub” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiikiisa New York.
Waxa uu ugu baaqay kooxaha Soomaalida ee gacanta ku heysa arrimaha hadda socda in ay hubiyaan xaaladaha in ay ku dhamaadaan si nabad-galyo leh oo xor ah.
Waxa ugu hambalyeeyay ummadda Soomaaliyeed in ay gaareyn waqti muddo dheer ay sugayeen, taasoo ay ku helayaan nabad, xasilooni iyo siyaasad sal leh” ayaa lagu yiri warka uu soo saaray Ban-Ki Moon xoghayaha guud ee QM.
Waxa uu ugu baaqay guddiga farsamada iyo odayaasha dhaqanka in ay soo xulaan baarlamaan karti leh oo wax ka qaban kara xaaladda Soomaaliya.
Waa in ay doortaan afhayeenka baarlamaanka iyo ku xogeennadiisa kaddibna madaxweynah jamhuuriyadda Soomaaliya, taasoo soo afjareysa xiliga KMG ah sida lagy gaaray heshiiska. Ayuu ku soo dhameeyay warka uu soo saaray Mr. Ban-Ki Moon